Madaxweynaha Galmudug oo sheegay ineysan dhaceyn doorasho ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubaland. | XAL DOON
Home NEWS Madaxweynaha Galmudug oo sheegay ineysan dhaceyn doorasho ay ka maqan yihiin Puntland...
Madaxweynaha Galmudug oo sheegay ineysan dhaceyn doorasho ay ka maqan yihiin Puntland iyo Jubaland.
Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa sheegay in aysan dalka ka dhaceyn doorasho ay ka maqan yihiin DG Jubbaland & Puntland xili sabtidii Xukuumadda ay shaacisay in aan waqti dambe loo baajin doonin dhinacyada dhaliilsan hab maamulka doorasho.
Qoor-Qoor ayaa dhankiisa xiligaas sheegay in uu jawaab ka waayay Madaxda Goboleedyada Puntland, Jubbaland & Musharixiinta, balse dhinacyadaas waa ay iska fogeeyeen in ay ku wargelin waayeen Madaxweynaha Galmudug.
Waxa uu iska difaacay in lagu eedeeyay in warqad jawaab ah laga waayay, maadaama markii horeba aan Xaanshi loogu dhiibin qodobada salka u ah wada xaajoodka uu ku howlanaa kahor inta uusan soo bixin go’aanka lagu iclaamiyay in lagu qabanayo Doorasho hal dhinac ah.
Madaxweynaha DG Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo la hadlay BBC-da ayaa meesha ka saaray in aysan dhici Karin Doorasho ay ka maqan yihiin Jubbaland & Puntland, maadaama ay qayb ka ahaayeen heshiiskii September 2020, isla markaana uusan jirin meel lagu talo gooyay in laga saaro.
“Marna ma maqlin meel lagu sheegay doorasho aan laga wada qaybgaleen, waa lagu heshiiyay in laga wada qaybgalaa sax ah, haddii ay jiraan tabashooyin waa in la xaliyaa, mana jirto meel lagu yiri Puntland & Jubbaland way ka xareen, marwaliba waxaa laga hadlayay in wax la xaliyo si loo galo Doorashada oo ah waajib” Sidaasi waxaa yiri Madaxweyne Qoor-Qoor.
Madaxweynaha DG Galmudug ayaa iska fogeeyay in uu u dhega furan yahay Xukuumadda, balse waxa uu dhinac ka rarnaantaas ku tilmaamay in ay ka tarjumeyso wadashaqeynta uu la leeyahay Dowladda Federaalka sida uu hadalka u dhigay.